Apthous Ulcer ( May, 2022 ) - Ministry of Health (MOH) Myanmar
Apthous Ulcer ( May, 2022 )
ခံတွင်းမှာပေါက်လေ့ရှိတဲ့ အပူနာအကြောင်း ( Apthous Ulcer ) ( May, 2022 )
ပါးစပ်ထဲမှာ ခဏခဏပေါက်လေ့ရှိတဲ့ aphthous ulcer ကိုတော့ မြန်မာလို ခံတွင်းပူနာလို့ အလွယ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ပါးစပ်အတွင်းထဲ နေရာစုံမှာ ပေါက်‌လေ့ရှိပြီး တော်တော်လေးခံရခက်လောက်အောင်ကို နာကျင်တတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အောက်နှုတ်ခမ်းအတွင်းပိုင်းနဲ့ သွားဖုံးတို့မှာပေါက်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အစားအသောက်တွေ စားတဲ့အချိန်ဆို အနာကို အစာနဲ့ ထိတိုက်မှုဖြစ်ပြီး ဆိုးဆိုးရွားရွား နာကျင်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ခံတွင်းနာတွေက ရေယုန်လည်းမဟုတ်သလို ကင်ဆာကိုလည်း မဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အထူးစိုးရိမ်စရာ မလိုအပ်ပါဘူးနော်။
Aphthous ulcerရဲ့ ပုံစံက ဘာနဲ့တူလဲ ?
• အနာကတော့ ၂-၃ မီလီမီတာလောက်ပဲရှိတဲ့ အနာသေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဲဥပုံ ၊ အဝိုင်းပုံ စသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ ရှိတတ်ပြီးတော့ အရောင်ကတော့ အလယ်မှာ အဖြူရောင် ၊ မီးခိုးရောင်ရှိတတ်ပြီး ဘေးပတ်လည်မှာတော့ နီရဲရဲကွင်းလေး ဝိုင်းနေတတ်ပါတယ်။
ဘယ်သူတွေမှာ ခံတွင်းပူနာ ဖြစ်လေ့ရှိလဲ ?
• ဘယ်သူမဆို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ လူငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ခံတွင်းပူနာတွေဟာ ဓမ္မတာမလာခင်အချိန်မျိုးတွေမှာ ပိုပေါက်တတ်ပါတယ်တယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းကတော့ ခံတွင်းနာ တစ်ခါပေါက်ပြီးရင်တောင် ခဏခဏပြန်ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် ခံတွင်းပူနာပေါက်တတ်တာလဲ ?
• ဘာကြောင့် ဒီလိုအနာတွေပေါက်လဲဆိုတာ တိတိကျကျ အဖြေမရှိသေးပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သလို ပူလောင်လွန်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ အက်ဆစ်ဓာတ်များလွန်းတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားမိခြင်းနဲ့ မာကြောလွန်းတဲ့ သွားပွတ်တံအမျှင်တို့နဲ့ ထိခိုက်မိတာမျိုးတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• လက္ခဏာ ဆိုးရွားပြင်းထန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်ခြင်း၊ မှိုစွဲခြင်း၊ lichen planusလို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါ၊ တချို့သောဆေးတွေရဲ့ side effect နဲ့ ကင်ဆာ‌ရောဂါတို့ကြောင့်လားဆိုတာတော့ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လက္ခဏာက ဘာတွေလဲ ?
• အစပိုင်းမှာတော့ အနာပေါက်မယ့်နေရာမှာ ပူလောင်ခြင်း၊ ကျဥ်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ခံစားရတတ်ပြီးမှ အနာပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ အနာက ပထမ (၃)ရက်လောက်မှာ အလွန်အမင်း နာကျင်တတ်ပြီးတော့ အစာစားတဲ့အခါ၊ စကားပြောတဲ့အခါတို့မှာ တော်တော်‌လေး အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို ကုသကြမလဲ ?
• အများစုကတော့ ကုသစရာမလိုဘဲ ပျောက်ကင်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ တချို့တွေကတော့ သည်းမခံနိုင်လောက်အောင် နာကျင်တဲ့အတွက် အကိုက်အခဲဆေးအပျော့စားလေးတွေ သောက်သုံးလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ( မိမိဘာသာ သောက်သုံးခြင်းထက် ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီး သောက်သုံးတာက ပိုမိုသင့်တော်ပါတယ် )
• အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားရမှာတွေကတော့
(၁) စပ်သော၊ အရသာပြင်းတဲ့ အက်ဆစ်ပါဝင်မှုများသော အစားအစာ (ဥပမာ – ဂရိပ်ဖရု၊ ရှာလကာရည်) တို့ကို ရှောင်ကြဥ်ပါ။
(၃) ဒိန်ချဥ်၊ ပျားရည်တို့လို ပျော့ပျောင်းတဲ့ အစားအစာတွေ စားပေးနိုင်ပါတယ်။
(၄) ရေသောက်တဲ့အခါမှာလည်း ပိုက်ကနေတစ်ဆင့် သောက်တာမျိုးကလည်း အနာသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
• အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအနေနဲ့လည်း စတီးရွိုက်ပါတဲ့လိမ်းဆေးတွေ ၊ ထုံဆေးပါဝင်တဲ့ ခံတွင်းလိမ်းဆေးတွေ ၊ ပါးစပ်ပလုတ်ကျင်းဆေးတွေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ (အနာက မသက်သာဘဲ ရက်ရှည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြသဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ် )
• Antiseptic mouthwashများ၊ ဆားရည်နွေးများဖြင့် ပလုတ်ကျင်းခြင်း
• ဒိန်ချဥ်၊ ပျားရည်တို့ သောက်သုံးပေးခြင်း ( ၄င်းတို့က ဘက်တီးရီးယားများကို သေစေနိုင်တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးဝင်‌ရောက်ခြင်းကြောင့် အနာပိုဆိုးလာတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် )
• အုန်းဆီလိမ်းပေးခြင်းဟာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။
• အနာပေါ်ကို ရေခဲကပ်ပေးခြင်းဖြင့်လည်း အနာပေါ် ရေခဲအရည်ပျော်သွားတဲ့အခါ အနာသက်သာတာ တွေ့ရပါတယ်။
• အထက်ပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အပူအစပ်လွန်ကဲတဲ့ အစားအသောက်များကို ရှောင်ကြဥ်ပါ။
• ဆေးလိပ် ၊ အညှော်နံ့တို့ကို တတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှရှောင်ကြဥ်ပါ။
• ပီကယ်ဝါးခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဥ်ပေးပါ။
• ရေများများသောက်ပါ။ ဗီတာမင်ဓာတ် စုံလင်မျှတအောင် စားပါ။
• စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ပါ။
• သွားတိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း ပျော့ပျောင်းတဲ့အမျှင်များပါဝင်တဲ့ သွားတိုက်တံကိုပဲ ရွေးချယ်သုံးပါ။ အစားအကြွင်းအကျန်တွေကနေတစ်ဆင့် ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ပွားနိုင်တဲ့အတွက် မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် သွားမှန်မှန် တိုက်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို အားလုံးလည်း ခံတွင်းနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်သလောက် ဗဟုသုတများ ရရှိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အထက်ပါနည်းလမ်းများအင်း လိုက်နာကာကွယ်ရင်း ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Murtagh,J , 2016. Murtagh’s patient education. 6th Ed. Australia:Mcgraw-Hill Australia,pp.222
Davidson 23rd edition pg -790
ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲ -- ၂၃ မတ် ၂၀၂၂
နောက်ဆုံးမွမ်းမံသည့်နေ့စွဲ --- ၂၃ မေ ၂၀၂၂